RASMI: Juventus oo xaqiijisay inuu ka tagay Blaise Matuidi… (Kooxdee la filayaa inuu ku biiro?) – Gool FM
(Turin) 12 Agoosto 2020. Kooxda kubadda cagta Juventus ee Waddanka Talyaaniga ayaa xaqiijisay in ciyaaryahankeedii Blaise Matuidi uu isaga tagay kaddib markii la burburiyey heshiiskii uu naadiga kula jiray.
Blaise Matuidi ayaa si rasmi ah u joojiyay qandaraaskiisii kooxda Juventus, iyadoo arrintaas la iska ogolaaday kaddib wadahadallo ay qaateen labada dhinac, waxaana haatan la filayaa inuu ku biiro kooxda Inter Miami ee ka ciyaarta horyaalka MLS-ka Mareykanka.
33-sano jirkaan khadka dhexe ka ciyaara ayaa Juventus kaga soo biiray kooxda PSG xagaagii 2017-kii, waxaana ay ku soo qaateen 25 milyan oo euro oo lagu daray gunnooyin.
Waxaa si weyn loo rajeynayaa inuu ku biiro kooxda weyn ee ka ciyaarta Horyaalka Mareykanka ee Major League Soccer, taasoo magaceeda la yiraahdo Inter Miami oo uu leeyahay David Beckham.
“Xiddiga khadka dhexe ee France ayaa ka tagay Juventus kaddib saddex sanadood oo uu la joogay, isla markaana uu kula guuleystay shan koob kooxda” ayuu u dhignaa Bayaan ka soo baxay Kooxda Juventus.
“Kaddib saddex sanadood iyo shan koob oo uu ku guuleystay kuwaasoo kala ah saddex Scudetti, hal Coppa Italia iyo hal Italian Super Cup, Blaise Matuidi ayaa macsalaameeyey Juventus, iyadoo la burburiyey heshiiska ciyaaryahanka.”
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska kula guuleystay Koobkii Adduunka 2018 lagu qabtay Waddanka Ruushka ayaa 98 kulan oo horyaalka Serie A ah u ciyaaray kooxda Juventus tan iyo markii uu ku soo biiray, waxaana uu naadiga Bianconeri u dheelay 133 kulan tartammada oo dhan.